Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa Kasoo Bixi Doona Shirka Loogu Yeedhay 5ta Nin – Noora Afgaab
Maxaa Kasoo Bixi Doona Shirka Loogu Yeedhay 5ta Nin – Noora Afgaab
Waxaa shalay magaalada Addis ababa si kadis ah ugu baxay shanta nin ee marka xaga titileka la eego ugu sareysa maamulka Itobiya uga dhisan Jigjiga kuwasoo kala ah 3dexda madaxweyne kuxigeen mr Cabdifatax, Cabdulahi Ethiopia iyo Cabdixakiin iyo sidoo kale Cabdi iley iyo afhayeenka baarlamaanka mr Maxamed rashiid ahna gudoomiyeha xisbiga. Warar hoose oo dhab ah ayaa sheegaya in uuna Cabdi iley kawar qabin sababta loogu yeedhay laakiin uu damcay in uu katago xubnaha kale taas oo laga diiday xaga dawlada dhexe. Sidoo kale warar ayaa sheegaya in uu hada buuxsamay filka Cabdi iley ee xaga danbiyada iyo xidhiidh xumida dhinaca federalka waxaana lafilayaa in aay halkaas kala yimaadaan warcad oo Cabdi iley talaabo lagaga qaadikaro ama lagu xadidayo awoodihiisa.
Inkasta oo uu Cabdi iley marka ay xaaladi ku cakiranto uu kudul ooyo madaxda federalka uuna yidhaahdo – Dhiig ayaa gamcaha iiga buuxa waxaanan u sameeyey waa idinka dartiin- taas oo kalifta inta badan in dib looga noqdo, sababtoo ah Itobiya way ogtahay dhibaatada uu ninkan u gaystay shacabka Ogadenya si looga hortago jabhadda ONLF, laakiin maadama oo uu marar hore kucaano maalay taas waxaa hada lagayaabaa in aynan kasoconin. Sikasaba hanoqotee waxay dadweynaha Jigjiga isha ku hayaan bal wixii kasoo kordha ilaa maalmaha soo socda.
Dhinaca kale warar aan lahubin ayaa sheegaya in Cabdi iley saxiibkii General Abraham Wolde loo badalay meelkale oo ah xuduuda aay Itobiya laleedayahay Sudan. Waxaa kaloo jirta inuu Cabdi iley dib ugu soo celiyey ninka la yidhaahdo YAASSIIN CUMAR xafiiska dakhli ururinta, kadib markii uu 2laba bilood uun ku-xigeen kasoo ahaa xafiiska beeraha. Ninkan oo ahaa gacan yarehii uqaabilsanaa ururinta dakhliga ayaa dib loogu soo celiyey isla xafiiskaas oo uu hada kahor ka ahaa kuxigeen wuxuuna hada noqday madaxa xafiiskaas. Sababta ayaa lagu fasirayaa siduu usoo galin lahaa una asturi lahaa lacag dakhli lagu tilmaamayo oo ah mid laga soo miirayo dhiiga dadka kana baxsan intii uu baarlamanku gacanta u taagay ama ansixiyey, taas oo kabadan 800 boqol oo million. Sababaha kale ee Yaasin Cumar logu soo celiyey xafiiska dakhliga ayaa ah Cabdi iley oo doonaya in uu lacagtaas isku difaaco kuna guneeyo madaxda sare ee Itobiya oo hadda noqday dhamaantood laaluush qaatayaal, inkastoo hadda laga warhayo dhaq-dhaqaaqyadiisa noocaas ah, hadana lama garan karo inay guud ahaan u suurtogali iyo inkale in uu lacagtaas u siticmaalo arimahaas kubaynta ah.